Uhlelo Russian "Izindawo ka Bakwethu" ingenye izici ezibaluleke kakhulu yokuthuthukisa Inqubomgomo yokufuduka WaseRussia. It yenzelwe ukusiza Izindawo zokuzithandela abantu Russian ababehlala kwamanye amazwe. Le projekthi seluqaliwe eminyakeni emihlanu edlule, inkathi kokusebenza yayo sizophelelwa yisikhathi ngo-2014.
Izidingo izifiki ezingaba
Uhlelo isimo Izindawo Bakwethu ngo-2014 uye washintsha abanye. izifunda eziningi Russian iqhaza iphrojekthi wenzé izichibiyelo ezisemqoka imithetho yayo yenqubo. Siye yashintsha imigomo nemibandela sokubhalisa lobuzwe izifiki. Ngakho, kulo nyaka, ngaphambi isicelo, isakhamuzi angaphandle kumele siphile endaweni yesifunda akhethiwe okungenani ngonyaka, esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi.
Ngaphezu kwalokho, kufanele zisebenze futhi babe isiqinisekiso esemthethweni womnotho isikhathi. imigomo okusha nemibandela unganikezi ithuba abahlanganyeli ukuba izakhamuzi esifundeni lapho yena engahlali. Ngenxa yalesi sizathu, uhlelo "Izindawo ka Bakwethu" akuyona efanele kulabo abafuna ukukhipha yisakhamuzi Russian ngaphansi inqubo lula, futhi ngemuva kokushintshwa endaweni lapho uhlala khona.
Ingqikithi yalo project
Izindawo yokuzithandela Bakwethu hlelo luyadingeka ukuze sithuthukise isimo lokubala ubuningi babantu kanye nokuthuthukiswa komnotho womphakathi ezindaweni osendaweni ebalulekile Russia nase ukwandisa isibalo sabasebenzi yobudala labantu. Uma wazalwa endaweni elaliyiSoviet Union futhi isakhamuzi kwelinye lamazwe, kube sekuqaleni kuka-ke; noma bashiya Russia nase wahlala kwelinye izwe, kokuba isakhamuzi, kodwa wanquma ukuza emuva ke unelungelo ukuba abe ilungu.
Ngokuhambisana zoMthetho Federal "On the Yemfihlo State of the Russian Federation maqondana Bakwethu hle ngokuhlala kwelinye izwe" Uhlelo abahlanganyeli kungaba abantu abazalelwa isimo esifanayo, abahlala noma baye bahlala kuwo, futhi unezici ezivamile umlando, ulimi kanye nakumasiko. Futhi Bakwethu siyinzalo ngqo abantu efakwe ohlwini.
Yini eyenza lo msebenzi
"Izindawo Bakwethu eRussia" Uhlelo ikuvumela ukuthuthela ezweni bese ezinye izimo oyithandayo ngoba ophilayo. Manje nabantu abagade abayingxenye yephrojekthi, zifanelekile ukuba izakhamuzi WaseRussia ngaphansi inqubo lula, ukuthuthela ezindaweni nokuwenza obhalisiwe. Ngeke ube ukukhipha imvume yokuhlala ukuqinisekisa ulwazi isiRashiya futhi kuhlinzeke imininingwane ngokufinyelela kwi imithombo etholakalayo esemthethweni engenayo. Futhi inqubo lula osebenza kuwo wonke amalungu omkhaya kwabokufika. Kuyaphawuleka ukuthi izakhamuzi, ngubani ukukunikeza ukubhaliswa amadokhumenti angelona iqiniso, ulwazi olungamanga, badingiswe ezivela eRussia noma isigwebo, akufanele bathembele kuleso ukuthola iphasiphothi okusheshayo Russian.
Izifunda ukuzibandakanya kulolohlelo
Ngo-2014, kuqala for Izindawo ezifundeni baba eKamchatka, Primorye, Trans-iBaikal, eKhabarovsk Krai, Buryatia, Magadan futhi Irkutsk, lase-Amur kanye Sakhalin izifunda, kanye Jewish Autonomous Region. Uma ugudlula kulezi zindawo Bakwethu ukhokhele usizo kwesikhathi esisodwa inani ruble ayizigidi 240 ngenxa yomkhaya futhi ruble 120 ilungu ngalinye lomndeni. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuntuleka kwezinhlelo ezibanzi nomholo engaguquki Ezinyangeni zokuqala eziyisithupha inikezwa imali ngo-50% we ubuncane ukudla endaweni ekhethiwe ukwakhisa.
Ubuzwe kanye nomsebenzi izimvume
Uhlelo "Izindawo ka Bakwethu" inikeza imvume ngokushesha imvume yokuba yisakhamuzi. Abahlanganyeli ukuthola ngokushesha lapho usufika kuleyo ndawo kuleli zwe, kungakhathalekile quota, okubhekisele nabanye abantu. Kulesi yisakhamuzi ingatholakala ngaphandle esinikezwe imvume yokuba yisakhamuzi, okuyinto lula kakhulu inqubo. izidingo Wokuqashwa abangenamakhaya ungenalo imvume yokusebenza. Ngaphezu kwalokho, lapho ngifika eRussia basuke ibuyiselwe izindleko kuthuthwa nezokuhamba amafa.
Yini edingekayo ukuze iqhaza iphrojekthi
2014 Uhlelo of Izindawo Bakwethu iminyaka kuhlanganisa le nqubo elandelayo zokuphatha:
Kufanele uqale ubhalise njengelungu ngokuthumela isicelo.
Okulandelayo, udinga ukuba banakekele ukuthola imibhalo ukuze bayosiza ekumiseni ngesimo esingokomthetho compatriot nomkhaya wakhe endaweni we Russian Federation (imvume yokuhlala isakhamuzi ipasipoti);
Khona-ke isakhamuzi uthola isitifiketi umhlanganyeli Uhlelo isimo.
Ngemva kwalokho, kumelwe ubhalise endaweni isingeniso endaweni WaseRussia.
Amaphepha adingekayo ngokubamba iqhaza
Uhlelo yokuzithandela Izindawo kuyatholakala abantu abafisa ukuthuthela Russia ngemva kokuhambisa isicelo kanye nefomu enxuseni. Ngaphezu kwalokho, kufanele kube ukunikeza amakhophi isikhundla madokumende alandelayo eqinisekisiwe ngumuntu ummeli olungisa izivumelwano:
Identity mayelana nale ndaba, amalungu omkhaya wakhe, afakwe iphrofayli.
Imibhalo isimo somshado kanye ilungu lomndeni.
Yonke imibhalo iyatholakala kwi imfundo.
Ngaphezu kwalokho, ungenza uhlu izinhlobo ezahlukene kwemibhalo noma izici endaweni odlule umsebenzi, enikeza ukuhlolwa omuhle nobuchwepheshe bale isicelo namalungu omndeni wakhe. Sicela uqaphele ukuthi lawo maphepha olunye ulimi, qiniseka nokuhumushela olimini Russian. A kuhunyushwa futhi kunyatheliswe ngolimi kwelinye izwe.
Ngomusa uhlole isipelingi kwamagama, izibongo, patronymic e imibhalo wesicelo namalungu omndeni wakhe. Ukubhala kumele kuhambisane isethulo kwemibhalo. Uma kukhona ukungafani zenzeka, uhlelo lokusebenza enxuseni ngeke samukele. Ngokuvamile kukhona izinkinga nezinto ezinganembile encwadini yomsebenzi. Ngakho-ke, uma unentshisekelo uhlelo isimo ka Izindawo Bakwethu, siyihlolisise wonke amarekhodi ngaphambi nokufakwa kwemibhalo. Isicelo kubhekwa phakathi kwezinyanga 1.5-3.5. Uma impendulo kunguyebo, kubikwa, ngokubhala, yalokho negative azokwazisa ngocingo.
Izinyathelo ukuthola yisakhamuzi Russian
Uhlelo Bakwethu Izindawo is udzimelela asathuthuka futhi ayingcosana ezifundeni ezinabantu we Russian Federation. Ukuze uthole Russian yisakhamuzi umhlanganyeli kulolu hlelo kufanele uqale ukukhipha imvume yokuhlala ngokuvumelana quota ku nesifunda esikhethiwe. Futhi izimo oyisibopho amaqiniso sokubhalisa futhi umsebenzi wesicelo edolobheni noma endaweni sokubhalisa kwemibhalo on ukudlula kabusha yokubhalisa kanye nokubhaliswa RVP iphrojekthi isitifiketi umhlanganyeli. Ngakho-ke, qhubekani nifuna ukuhambisa wonke Russia etholakalayo, uhlelo Bakwethu Izindawo isetjenziswa kuphela kwezinye izindawo kuleli zwe.
Kuze kube manje, uhlelo wenza izinguquko ezithile, futhi umphumela waba ukuthi isikhathi ukuthola yisakhamuzi liye lenyuka kakhulu. Ngaphezu kwalokho, inqubo baba ukubhaliswa kancane kulula kwemibhalo ngendlela evamile.
Ngemuva kwemvume isicelo kuyadingeka futhi ukuya ehhovisi lenxusa ukuthola isitifiketi iqhaza kuhlelo. Ngezinye ngokwalo kufanele abe isethi efanayo imibhalo kuphela yasekuqaleni. Ngaphezu kwalokho, kudingeka uhlinzeke off-umbala izithombe ezimbili umfakisicelo ekulinganiseni 3.5 ngu 4.5 cm.
2014 Bakwethu Uhlelo Izindawo, umhlanganyeli akugcini isikhathi sathutha, kodwa ochwepheshe batusa ukuba ukudonsa, futhi ngokushesha wathumela ku-nesifunda esikhethiwe we Russian Federation. Ngezinye izikhathi abantu bathole isinqumo esihle futhi isitifiketi umhlanganyeli, ukubambezeleka hambisa isikhathi esingangonyaka noma ngaphezulu, kodwa kudala ezinye izinkinga Ngasohlangothini Russian ukuthi siphakamise nokukhokhwa kwezimali, njengoba isabelomali kulezi izinkokhelo sibekwa ekuqaleni konyaka.
Kuyaphawuleka ukuthi kwelinye nelinye esifundeni nedolobha izimo ezengeziwe kanye namathuba project abahlanganyeli kungenziwa enikeziwe. Ngokwesibonelo, ezindaweni ezithile kungasiza ababaleki ukuba bangabandlululwa emsebenzini, ukuphakamisa izikhala ezimbalwa. Ikakhulukazi ochwepheshe eyigugu angathembela ukuhlinzekwa kwezindlu.
Uhlelo Izindawo Bakwethu eRussia eklanyelwe ukusiza abantu ababehlala kwamanye amazwe futhi efisa ukuba babuyele ezweni lenkaba yabo zomlando. Uhlelo sivunyiwe Juni 22, 2006 esinqumweni uMongameli we Russian Federation. Izinjongo esemqoka yalolu usizo izifiki - kuyinto ashukumise futhi ahlele inqubo kuthuthwa Bakwethu njalo yokuzithandela. Ngaphezu kwalokho, ngenhloso uhlelo state isinxephezelo ukwehla bemvelo labantu kuleli zwe bebonke kanye ezifundeni yayo ehlukile ikakhulukazi edonsa ababaleki ngoba yokuhlala unomphela eRussia.